Nagu saabsan - Yantai Hongning International TRADE Co., Ltd.
Raadinta tayo sarreysa iyo abuurista adeeg dhammaystiran waa ujeedkeenna joogtada ah
Macaamiisha marka hore, Tayada u janjeedha, haynta amaahda ganacsigu waa niyadda adeegga shirkadda
Yantai Hongning International Trade Co., Ltd. waxay ku taal magaalada yantai magaalada Shandong, magaalada yantai waxay wehelisaa qulqulka quruxda badan ee badda Bohai waxayna u dhowdahay dekedda Qingdao iyo garoonka diyaaradaha Qingdao, waa magaalo xeebeed caan ku ah dal iyo dibadba.
Shirkadda Yantai hongning waa shirkad xirfadlayaal ah soo dejin & dhoofinta noocyo kala duwan oo aluminium ah, soo jiido giraanta aluminiumka, giraanta giraanta koofiyadaha caagga ah ee aluminium-caag ah, kaabsalka PVC, dhalada dhalada iwm. koofiyadaha, giraanta jiidaya aluminium ama koofiyadaha taajka waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro dhalada biirka, dhalada cabitaanka iyo dhalada caanaha iwm waana sahlan tahay in la furo oo macaamilku si diiran u soo dhoweeyo.
Wax soo saarkayaga waxaa loo dhoofiyaa Yurub, Oceania, Koonfurta Ameerika, Afrika, Aasiya Dhexe, Bariga Dhexe, iyo Koonfur Bari Aasiya iwm in kabadan 30 dal iyo aag aduunka oo dhan.
Kooxaheenu waxay leeyihiin khibrado ganacsi oo hodan ah waxayna bixiyaan adeeg xirfadeed si ay ula kulmaan macaamiisha kala duwan ee looga baahan yahay ogaanshaha iyo sida loo gaaro iskaashi muddo dheer ah oo lala yeesho macaamiisha. Khadka waxsoosaarka badeecadaha, ka wanaagsan adeegga kadib iyo adeegga saadka ee habboon ayaa hubiya tayada alaabada macaamiisha iyo waqtiga keenista. Ma daalin doonno dadaal si aan ugu fidino adeegga ugu fiican macaamiisha gudaha iyo dibaddaba, oo aan la horumarinno iyaga si wadajir ah mustaqbalka cusub ee ifaya.
Yantai Hongning ku soo dhawow!